၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာပျက်မှာလား
Posted by kai on Nov 21, 2009 in Critic, Education, Science & Religion |5comments
(ပြုစုသူ – ဆရာဦးကျော်မြင့်၊ အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့)
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်သောနေ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လူအများကိုးကွယ်ကြသည့် ဘာသာကြီးတစ်ခု၏အယူအမြင်များကို အခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလည်ပတ်မှု နှေးကွေးသွားရာမှ ငလျင်ကြီးများလှုပ်ခြင်း၊ ရာသီဥတု အကြီးအကျယ်ဖေါက်ပြန်ခြင်းတို့ကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်စု ပျက်သုဉ်းလှုနီးပါး ဖြစ်သွားရသော်လည်း ဘာသာတရားကိုကြည်ညိုသူလူတစ်စု အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပုံကို ဇာတ်လမ်းဆင်ထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
၂၁ ရာစုနှစ် သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကလည်း နီဘီရူးအမည်ရှိ ဂြိုဟ်တစ်လုံး ကမ္ဘာဆီသို့ ဦးတည်လာနေသဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်မိကာ ကမ္ဘာပျက်သွားနိုင်သည်ဟု ပြောကြားကြောင်း အင်တာနက် ၀က်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပလူပျံအောင် ဖေါ်ပြနေကြသည်။ နာဆာအဖွဲ့ကြီးက ထိုအဆိုများ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ကြောင်း အချက်အလက် အကြောင်းအကျိုးများနှင့်တကွ ရှင်းပြထားချက်ကိုလည်း ဖတ်ရှုလိုက်ရသည်။
မိမိအနေဖြင့် ကမ္ဘာပျက်နိုင်သည့်အကြောင်းများကို စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်သောအခါ အဓိကအားဖြင့် နှစ်မျိုးနှစ်စားသောနည်းလမ်းတို့ကို တွေ့မြင်မိသည်။ ပထမတစ်မျိုးအနေဖြင့် အာကာသကြီးအတွင်း တည်ရှိနေကြသော နေ လ ဂြိုဟ် နက္ခတ် တာရာ စသည့် အာကာသ၀တ္ထုများ ရွေ့လျား လှည့်ပတ် သွားလာနေမှုတွင် ဟန်ချက်ပျက်စေနိုင်သော အကြောင်းတရားများ ညီညွတ်ပေါင်းဆုံလာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပျက်သွားနိုင်သည်။
ဒုတိယတစ်မျိုးအနေဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို မှီတင်းနေထိုင်ကြကုန်သော လူသားတို့၏ မိုက်မဲစွာဆောင်ရွက်မှုများ အားကြီးလာလျှင်လည်း ကမ္ဘာပျက်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ခြုံငုံပြီးပြောရလျှင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ခြင်းနှင့် လူလုပ်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြသည်။
အာကာသဟင်းလင်းပြင်အတွင်း တည်ရှိနေကြသော သက်ရှိသက်မဲ့အရာအားလုံး မတည်မမြဲ ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးလေ့ ရှိသည်မှာ သဘာဝနိယာမတရားဖြစ်သည်။ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းတရားများ ညီညွတ်စွာပေါင်းဆုံမိသောအခါ ဖြစ်တည်လာကြပြီး အချိန်ကာလ၏အတိုက်အစားခံရခြင်း၊ အပ ပယောဂ၏ဖျက်ဆီးခံရခြင်းတို့ ရှိလာသည့်အခါ ဖေါက်ပြန်ပျက်စီးကြရသည်။
မိမိလေ့လာတတ်မြောက်ထားသော နက္ခတ်ဗေဒင်ရှုထောင့်မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာပျက်နိုင် မပျက်နိုင်ကို သုံးသပ်တင်ပြလိုပါသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၄ ) ရက်နှင့် (၅) ရက်နေ့အတွင်း အရှေ့တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်နည်းစနစ်အရ တွက်ချက်ရာတွင် ဂြိုဟ်ကြီးရှစ်လုံး မကာရရာသီအတွင်း ရပ်တည်ပူးယှဉ်ခဲ့ဖူးသည်။ ထိုကာလမတိုင်မီက ထိုခေတ် နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင်များ အကြားတွင် ဂြိုဟ်ကြီးရှစ်လုံး ပူးယှဉ်မှုကြောင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပျက်နိုင်ကြောင်း ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ လက်တွေ့တွင်ကား ကမ္ဘာပျက်ဖို့ဝေးစွ၊ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်မှု ကြီးကြီးမားမားပင် မရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၆၂ ခု၊ မတ်လ (၂ ) ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ဂြိုဟ်ကြီးရှစ်လုံး ပူးယှဉ်မှုကြောင့်ဟု အကြောင်းပြပြီး ထွက်ပေါက်တွေ့သွားကြသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကဲ့သို့ ထူးခြားသော ဂြိုဟ်ပူးယှဉ်မှုမျိုး မတွေ့ရပါ။ ပုံမှန် အပူးအယှဉ် အမြင်များကိုသာ တွေ့ရသည်။ နေအဖွဲ့အစည်းတွင် ဂြိုဟ်လုံးအကြီးဆုံး၊ ဒြဗ်ဆွဲအားအများဆုံးဖြစ်သော ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီး ၂၀၁၂ခု နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် မိဿရာသီ၌ ရပ်တည်နေပြီး မေလကုန်ခန့်တွင် ပြိဿရာသီသို့ ပြောင်းရွေ့ရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ ဂြိုဟ်လုံးအကြီးဆုံးဖြစ်သော စနေဂြိုဟ်က ၂၀၁၂ တစ်နှစ်လုံး တူရာသီ၌ ရပ်တည်ပြီး ကြာသာပတေးဂြိုဟ်နှင့် ပထမနှစ်ဝက်တွင် အပြန်အလှန် အမြင်ရှိနေလိမ့်မည်။
အရှေ့တိုင်းနက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရပ်တွင် ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီးသည် အတိသောမဂြိုဟ်၊ ကယ်တင်ရှင်ဂြိုဟ်၊ ကောင်းကျိုးအများဆုံး ပေးတတ်သောဂြိုဟ်အဖြစ် ယူဆထားသည်။ စနေဂြိုဟ်ကိုမူကား အတိပါပဂြိုဟ်၊ နှိပ်စက်ဖျက်ဆီး တတ်သောဂြိုဟ်၊ ဆိုးပြစ်အပေးတတ်ဆုံးဂြိုဟ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသည်။ အပြုဂြိုဟ်နှင့် အဖျက်ဂြိုဟ်တို့ အားပြိုင်လွန်ဆွဲ နေကြရာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၌ စနေဂြိုဟ်က ဥစ်အား၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်က မိတ်အားသာရသဖြင့် အဖျက်အားက အနည်းငယ်သာသလို ဖြစ်နေလိမ့်မည်။
သိပ္ပံပညာရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်လည်း ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကြီးသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွက် ကယ်တင်ရှင်ပင်ဖြစ်သည်။
နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဝင်ရောက်လာသော ကြယ်တံခွန်အပိုင်းအစများ၊ ဥက္ကာခဲများ စသည်တို့ကို ဒြဗ်ဆွဲအား အများဆုံးဖြင့် ဆွဲယူသွားတတ်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာနှင့်တကွ အခြားသောဂြိုဟ်ငယ်ကလေးများ အန္တရာယ်နည်းပါးသွားရသည်။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်က ရှူးမိတ်ကာလဲဗီးအမည်ရသော ကြယ်တံခွန်မှ အပိုင်းအစများ ကြာသပတေးဂြိုဟ်ကို ၀င်ရောက်တိုက်မိခဲ့ဖူးသည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိသဖြင့် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဟန်ချက်ပျက်ပြားမှု မရှိခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
သို့အတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်နိုင်ခြေ ဗေဒင်နိမိတ်မတွေ့ရပါ။ လူလုပ်ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပတ်သက်၍ကား မှန်းဆရန် အလွန်ခက်ခဲလှသည်။ လူ့စိတ်သည် မျောက်စိတ်နှင့်တူသည်။ အလွန်တရာ အပြောင်းအလဲ မြန်လှသည်။ အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၊ ကမ္ဘာဖျက်လက်နက်ပိုင်ဆိုင်ထားသောနိုင်ငံများရှိ လူသားခေါင်းဆောင်များ မိုက်မိုက်မဲမဲ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ကြမည်ဆိုလျှင်ကား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်မှမဟုတ်၊ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပင် ကမ္ဘာပျက်မည့်အန္တရာယ် ရှိနေပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်။
(ဆရာဦးကျော်မြင့်၊ အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့)
မှတ်ချက်။ ။ ယခုတလော ခေတ်စားနေသော ၂၀၁၂ အတွက် ဗမာ့ဗေဒင်နက္ခတ်ပညာရှင်တဦး၏ အမြင်ဖြစ်သည်။
Thant Sin Tun says:
it isavery reasonable explanation for 2012 rumor. People should understand about the how the nature work and how the Kama work. Some people are so extreme in believing and some are so negligence. I hope that explanation could help to those people who do not have much general knowledge.
It isavery good opinion.I like this.
I like you to write longer than that.
Yes.I agree this opion.
Only men can destory their Earth.
ကမ္ဘာကြီးကတော့ စတင် ဆန္ဒပြနေပါပြီ
သူ့ အပေါ်မှာ နေတဲ့ လူသားတွေ ရဲ့ မဆင်မခြင် လုပ်ချင်ရာ လုပ်ကြတာတွေကို
ကပ်ဘေးလို အန္တရာယ်တွေ ပြခြင်းအားဖြင့် ။